Baga nagaan hiikamtan! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBaga nagaan hiikamtan!
Ijoolleeen tunniin ji’a Caamsaa 17, 2020 keessa namoota hedduu waliin aanaa Mataa Wayaamaatti hidhaman. Barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa barataniidha. Kan suuraarra Xummeefi Jiloodhaa. Xummeen barattuu kutaa 5ffaati. Jiloon barattuu kutaa 7ffaati. Adoo gaaffii seera ta aadaallee hin gaafatin ji’a lamaaf walakkaa turan. Booda irratti gara Yaaballoo dabarfaman. Yaaballoottis diqqoo miila dhaabatanii; bultii 94 booda kaleessa mirgii wabii eegameefii nagaan ijoollee lama dhibii waliin nagayaan bahan.Baga nagaan baatan! Baga AABBOO Waaqii donfofa baraallee isan irraa qabe! Warrii seeraafi warrii watwaachaaa namootas dhageettanii, akka baraa mitii akka aadaa, akka lafaa miti, akka falaa, safuufi aadaa itti dhalannees yaaddanii daayimman kanneen mana hidhaa keessaa baaftan galata qabdu! Galatoomaa!
Oromoon durii aadaa qaba. Dubartiin muka laafaa jedha. Muraa murtiillee ta ufii qabda. Bara namni hammaatee huwwaallee irraa hin gorre, kanas Oromoon osoo aadaa sirna gadaa ta kaleessaa yaadatee akka amma keessa jirru kan hin ta’u! Tanaaf seerichaafi aadaan kaleessaa Oromoof akka jabduu taate Oromoo kamuu beekee, waan amma deemaa jiru kan keessaattis gara saba ofii goruu male! Aabboo Waaqii nagaa nu guutinna!
Kan hidhame ha hiikkamu!
Kan dhukkube ha fayyuu!
Oduu Ammee: “Qeerroo nurraa dhaabdu malee yaala (doktora) siif hin hayyamnu” jechuun Jawar gaafatan. Jawar ammoo “asittin du’a malee hin godhu. Wabiin kiyya, abukaatoon kiyya ummata kiyya” jechuun didee jira. Hanga saa’aa kanatti yaala hin arganne. Gootummaan doorsisa jaraa didee du’aaf of qopheessee jira Jawar Mohammed.
Qeerroon qabsoo itti cimsuu qaba!! Qabsoon bifa ammaa kanaan yoo itti fufe qofa kan Jawar hiikamuu dandayu!